खुल्यो नेपाली पुँजी बजारमा अहिलेसम्मकै ठूलो आईपीओ :Nepal Bisesh
खुल्यो नेपाली पुँजी बजारमा अहिलेसम्मकै ठूलो आईपीओ
January 15, 20216:49 am Nepalbisesh
काठमाडौं– नेपालको पुँजी बजार इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो साधारण सेयर (आईपीओ) खुलेको छ। सरकारी लगानीको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले आजदेखि आठ करोड कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो।
अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कुनै पनि कम्पनीले यति ठूलो अर्थात् आठ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आठ करोड कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थिएन।
बैंकले आठ करोड कित्ता सेयर बिक्री गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ। यो भनेको कम्पनीको कूल सेयरको ४० प्रतिशत हो।
जसमध्ये एक लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ४० लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ।
कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी बसेको सात करोड ५८ लाख ४० हजार कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन गर्न पाउँछन्।
पूर्वाधार बैंकमा १३ जनाको संस्थापक सेयरमा लगानी रहेको छ। जसमा अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनीहरू, पूनर्बीमा कम्पनी र व्यावसायिक घरानाकोसमेत संस्थापक सेयर छ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको दुई करोड कित्ता, एनआईसी एसिया र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको समान एक/एक करोड, ग्लोबल बैंकको एक करोड नौ लाख र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एक करोड कित्ता लगानी छ।
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित यस बैंकलाई सरकारकै अग्रसरतामा स्थापना गरिएको हो।
यो बैंक वि.स. २०७५ साल जेठ २५ गते नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। यसले सोही वर्षको माघ २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा बैंकिङ कारोबारको स्वीकृति पाएको थियो।
बैंक स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति, परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी लगायत छन्।
कति दिने आवेदन?
सर्वसाधारणले कम्पनीको सात करोड ५८ लाख ४० हजार कित्तामा आवेदन दिन पाउँछन्। यसअघि भर्खरै खुलेको चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओमा सबैभन्दा धेरै आवेदन अर्थात् झण्डै १२ लाखको आवेदन परेको छ।
यस हिसाबले हेर्दा यसअघिको आवेदन संख्यामा केही बढेर १३ लाख पुग्यो भने लगानीकर्ताले एक जना बराबर झण्डै ६० कित्ता सेयर पाउने अनुमान छ। यद्यपि, यो भन्दा बढीले आवेदन दिएको अवस्थामा प्रति लगानीकर्ता ५० कित्तासम्म पर्ने देखिन्छ।
तर, कम्पनीमा कम्तीमा १० कित्तासम्म पनि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ। यस्तै अधिकतम दुई करोड कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने छ।
बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल रहेको यस कम्पनीको आईपीओमा मेरो सेयर तथा सीआस्बामा आबद्ध सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सकिने छ।
प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरु, चार एजेन्डामाथि छलफल
प्रचण्डले लगाए कोरोना खोप
मिलन चाम्सको ‘गोर्खा वारियार २’ अफिसियल घोषणा
प्रतितोला १७ सयले घट्यो सुनको मूल्य
प्रधानमन्त्रीद्वारा ताप्लेजुङको दोभानवस्तीमा ५१ घर नष्ट हुने गरी भएको आगलागीप्रति दुःख व्यक्त